सहमति नगरी न्यूनतम पारिश्रमिक बढाएको भन्दै निजी क्षेत्र असन्तुष्ट - Kohalpur Trends
२० वैशाख, काठमाडौं । सरकारले साउन १ गतेबाट लागू हुने गरी श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाएको छ । यसअघि १३ हजार ४५० रहेको न्यूनतम् तलवमान १५ हजार पुगेको छ । तर, सरकारी निर्णयमा निजी क्षेत्रले भने असन्तुष्टि पोखेका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा रोजगारदातासँग सरकारले पारिश्रमिक बढाउने गरी कुनै सहमति नगरेको बतउँछन् । ‘यसबारेमा हामीसँग सहमति भएको छैन, एक-दुई दिनभित्र रोजगारदता परिषदको बैठक बसेर सरकारको निर्णयबारे औपचारिक धारणा बाहिर ल्याउँछौं,’ उनले भने,’अहिले कोरोनाको महामारीले उद्योगी व्यवसायी र मजदुरवर्ग सबै प्रभावित भएकाले चुनौती बढेको पक्ष कसैबाट लुकेको छैन ।’
यो पटक सरकार र मजदुर पक्षले पारिश्रमिक वृद्धिको प्रस्ताव गर्दा रोजगरदाताका तर्फबाट बैठकमा बसेकाहरुले सहमति जनाएका थिएनन् । उनीहरुले महामारीले उद्योग व्यवसाय बचाउन मुस्किल परेका बेला प्रस्ताव गरेअनुसार श्रमिकको तलवमान बढाउन नसकिने बताएका थिए ।
तर, ट्रेड युनियन संगठनहरु न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउनुपर्ने भन्दै आक्रमक ढङ्गले छलफलमा आएपछि उद्योगी/व्यवसायीका प्रतिनिधिले कानूनअनुसार गर्न भन्दै बैठक छाडेका थिए । त्यसपछि पारिश्रमिक बढाउन सरकार समक्ष सिफारिस हुन सकेको थिएन ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोर अहिलेको अवस्थामा वृद्धि भएको पारिश्रमिक दिन सम्भव नहुने धारणा राख्छन् । ‘यसबारे हामी रोजगारदाता परिषद्मार्फत नै आधिकारिक धारणा बाहिर ल्याउँछौं,’ मोरले भने,’यो महामारीको नकारात्मक असरबाट सबैलाई बच्ने र बचाउने बेला हो, सरकारले यसलाई मनन गर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो ।’
श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बढ्यो, साउनबाट मासिक १५ हजार
Previous Previous post: आइसोलेसनमा बस्ने बिरामीहरूले कस्तो कुरामा ध्यान दिने ?
Next Next post: आखिर यी किशोरीले किन बिक्री गरिन् आफ्नो कु मा रि त्व ? यस्तो छ कारण –